डाक्टर तारा शाहको नजरमा बीपी प्रतिष्ठानका नर्सहरूका समस्या र समाधानका उपायहरू
डाक्टर तारा शाह धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा नर्सिङका विद्यार्थीहरूलाई पढाउँछिन् । २०४४ सालमा पोखरा नर्सिङ क्याम्पसबाट नर्सिङमा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह हासिल गरेकी शाहले २०५४ सालमा महाराजगञ्ज शिक्षण अस्पतालबाट स्नातक गरिन् । उनले त्यसपछि भारतबाट स्नातकोत्तर गरिन् भने २०६६ सालमा विद्यावारिधीसमेत नर्सिङमै गरिन् ।
२०५४ सालदेखि बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आबद्ध शाह नेपाल नर्सिङ सङ्घकी केन्द्रीय उपाध्यक्षसमेत हुन् । राजविराज अञ्चल अस्पतालदेखि काठमाडौंको नरदेवी आयुर्वेद अस्पतालमा ९ वर्ष सरकारी सेवा गरेर शाह बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा जोडिएकी हुन् । उनै शाहले विश्व नर्सिङ दिवसको अवसरमा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका नर्सहरूका समस्याहरूको बारेमा बुँदागत रूपमा जानकारी दिइन् । शाहकै शब्दमा नेपालकै प्रतिष्ठित स्वास्थ्य संस्थामा नर्सका समस्याहरू यस्ता छन्ः
१. नर्स प्यासेन्ट रेसियो (नर्स बिरामी अनुपात) धेरै
अहिले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एक नर्सले २५ जनासम्म बिरामी हेर्नुपर्ने हुन्छ । कहिलेकाहीँ त यो भन्दा धेरै पनि हुन्छ । खासमा नेपाल सरकारको नियमअनुसार एक जना नर्सले ६ जना बिरामीमात्रै हेर्नुपर्ने हो । बीपीमा यसो हुन सकेको छैन । यसमा सुधार हुुनुपर्छ । सरकारी अस्पतालमा ४० घण्टा काम गर्नुपर्ने हुन्छ भने बीपीमा हप्तामा ४८ घन्टाको नियम छ ।
२. तालीम, अध्ययन बिदादेखि स्थायी हुन समस्या
बीपीमा काम गर्ने नर्सहरूलाई त्यति धेरै तालीम दिइँदैन । सरकारी अस्पतालको जस्तो हुँदै हुँदैन । पहिलेपहिले अध्ययन बिदा दिने गथ्र्यो । बीएन पढ्न धेरैले बिदा पाएको उदाहरण पाइन्छ । पछिल्लो समयमा यो सुविधा छैन । अध्ययन बिदाको मात्रै होइन स्थायीको पनि समस्या छ । बढुवा र स्थायी गर्ने प्रक्रिया अहिले स्थगितजस्तै भएको छ ।
यी दुई समस्याले नर्सहरूलाई धेरै असहज भएको छ । सरकारले नर्सलाई २३ हजार ५ सय तलब दिन्छ तर बीपीले भने २८ हजार दिन्छ । तर, तलब राम्रो दिने बीपीले सरकारीजस्तो अध्ययन बिदा र स्थायीमा भने केही गरेको छैन । यो समस्या समाधान गर्न व्यवस्थापनले अध्ययन बिदा र पुराना कर्मचारीलाई नियम बनाएर स्थायी गर्नुपर्छ । बेलाबेला तालीमहरू नियमित रूपमा हुनुपर्छ ।
३. रात्रीकालीन कामको अलाउन्स (भत्ता) र वार्षिक पोशाकभत्ता थोरै
सरकारी अस्पतालहरूमा राती खट्ने नर्सलाई प्रतिदिन २ सय रुपैयाँ अलाउन्स दिइन्छ । बीपीमा भने ६० रुपैयाँ मात्रै छ । यो पनि धेरै पहिलेको नियमअनुसार चलिरहेको छ । पोशाकभत्ता नेपाल सरकारले वार्षिक साढे ७ हजार दिन्छ । बीपीमा भने ३ हजार २ सयमात्रै दिन्छ । यी सुविधाहरू बढाउनुपर्छ । सरकारी जत्तिकै वा त्यो भन्दा धेरै सुविधा बीपीमा हुनुपर्छ ।
४. वार्षिक बिदा थोरै
सरकारी नर्सले ५२ हप्ता शनिबारे बिदाबाहेक अन्य ४० वटा हाराहारी सार्वजनिक बिदाहरू पाउँछन् । अन्य बिदाहरू पनि हुन्छन् । तर, बीपीमा भने ५२ दिने शनिबारे बिदा र १८ दिन मात्रै अन्य सार्वजनिक बिदा हुन्छ । थोरै बिदा पनि एक समस्या हो जस्तो लाग्छ । यसको उचित निचोड निकाल्नुपर्छ ।
५. नीतिगत तह र कार्यसमितिमा नर्सहरूको पहुँच अभाव
बीपीमा सामान्य पीसीएल (प्रवीणता प्रमाणपत्र तह) उत्तीर्णदेखि पीएचडी (विद्यावारिधी) गरेकासम्म जनशक्ति छन् । तर, उनीहरूलाई नीतिगत तहमा लगिएको छैन । हामीले २०५६ सालदेखि माग गरे पनि लगिएको छैन । यो समस्या हामीभन्दा अगाडिका अग्रजहरूको पनि हो । बीपीदेखि मन्त्रालयसम्म यो समस्या छ । यसको सुधार हुनुपर्छ । नीतिगत तहमा विज्ञ नर्सहरूलाई लानुपर्छ ।